Tag: dhoofinta | Bogga 2 ee 2 | Martech Zone
Khamiis, Juun 4, 2015 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Waxaan joogaa Chicago ee IRCE oo gabi ahaanba waan ku raaxeysanayaa dhacdada. Bandhigu waa mid aad u ballaadhan oo aanan hubin in aan ka soo dhex muuqan doono dhacdada oo dhan marka la eego dhawrka maalmood ee aan halkaan joogo - waxaa jira shirkado yaab leh oo aan wax ka qori doonno. Diirad saarida waallida ah ee natiijooyinka la cabiray ee soo bandhige kasta oo halkan jooga ayaa sidoo kale ku raaxeysanaya. Mararka qaarkood markaan xaadiro dhacdooyinka kale ee suuqgeynta, qaar kamid ah fadhiyada iyo diiradda ayaa umuuqda
Talaado, Oktoobar 9, 2012 Douglas Karr
Ecommerce waa saynis - laakiin maahan wax qarsoodi ah. Tafaariiqleyda ugu fiican ee khadka tooska ah ka shaqeeya waxay baneeyeen waddo inteena inteeda kale ah iyadoo la hirgelinayo kumanaan istiraatiijiyad baaris ah iyo in la siiyo dib-u-eegis xog ah dadka kale si ay u arkaan oo wax uga bartaan. Maanta, ku dhowaad saddex-meelood meel wadarta guud ee dukaamada internetka ee internetka. Tafaariiqleyda, lambarkan wuxuu cadeynayaa awooda sii kordheysa ee iibka internetka. Si loo soo jiito macaamiishan ku xiran, dukaamada waa inay ka dhigaan wax ku iibsashada websaydhkooda mid farxad leh,
Khamiista, Diseembar 1, 2011 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Si aad ah uma hubo inaad u sinnaan karto labadan istiraatiijiyad ee macaamiisha sasabashada. Waxay ila tahay aniga in dhimis-dhimistu ay tahay macne weyn oo qof lagu geeyo bartaada e-commerce, laakiin maraakiibta bilaashka ah waxay noqon kartaa habka lagu kordhiyo sicirka beddelaadda Waxaan sidoo kale xiise u qabaa sida ay daacad u yihiin dadka wax iibsanaya. Haddii aad qiimo-dhimis, dadweynuhu maalin uun soo noqdaan oo wax iibsadaan qiime-dhimis la'aan? Haddii aad bixiso maraakiib bilaash ah, miyaanay taasi ahayn muuqaalka goobtaada